China Elu Bay China Manufacturers & Suppliers & Factory
Elu Bay - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Elu Bay)
Azụchacha Oké Osimiri Ukwu , BBier High-Tech Lighting bụ soplaị nke elu mma n'èzí / ime ụlọ na ada ogige ọkụ usoro na ngwọta maka gị oru ngo. Elu Bay ìhè bụ ihe ngwọta dị mfe maka ime ụlọ na n'èzí ebe ọkụ ọkụ dị na ngwa ahia na azụmahịa. Ụlọ nkwakọba ihe 100W High Bay Light bụ nnukwu ihe mgbakwunye maka mgbatị...
Ngwongwo nke Aluminom Die-cast 100W UFO dị elu
Ngwongwo nke Aluminom Die-cast 100W UFO dị elu 1. mere ka e jiri nnukwu ọkụ mmiri mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. ufo ada nnukwu mmiri na -ewu ewu ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
UFO Ogwe ọkụ dị ọkụ 150w 19500lm
Nke a na- acha uhie uhie UFO Ìhè na-enye ihe dịka 16500lm na ọkụ ọkụ ọkụ 600W. Na UFO Ogwe ọkụ Bell kacha mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ntanetị, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ntụrụndụ, ámá egwuregwu, ụlọ ọrụ ntanetị, ọdụ ụgbọ oloko, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa....
Elu Bay Esi Elu Bay Elu Bay 100w Elu Bay ìhè Elu Bay UFO Led Elu Bay Ike 150w Elu Bay bọlbụ Led Bay